ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် Moon Engineering Joint Venture Co.,Ltd. တိုရဲ့ Radio Frequency Identification (RFID) စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Moon Engineering Joint Venture Co.,Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးနှင့် Moon Engineering Joint Venture Co.,Ltd. မှ Executive Director Mr. In-Jin Kim တို့မှ RFID စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် RFID စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ Developer ခေါ်ယူရေးတင်ဒါလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းဝန်းကျင်ခန့်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
ယာဉ်များကိုစစ်ဆေးကြပ်မတ်နိုင်ရန်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ယာဉ်များကို အလွယ်တကူစိစစ်ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် တရားမဝင်မှတ်ပုံတင်မဲ့ မော်တော်ယဉ်များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား စစ်ဆေးထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် Radio Frequency Identification (RFID) စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွင် RFID sticker (သို့မဟုတ်) RFID tag များတပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်မဲ့ယာဉ်များ၊ ဆိုင်ကယ်များကို အလွယ်တကူစစ်ဆေးထိန်းချုပ်သွားနိုင်မည်ဟု သိရသည်။ RFID စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် လမ်းဘေးမြေများအသုံးချခွင့်နှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ infrastructure များတည်ဆောက်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အခြား transport facilities များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းဝေးကိုဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။